Ọrụ Ndị Ahịa | Radị Rave
Chọrọ enyemaka ịhọrọ nha gị?
Biko rụtụ aka na ntuziaka nguzo anyị ebe a.
Inwe ajụjụ banyere ihe ma ọ bụ ihe ị nyere n’iwu? Biko ziga ozi email shop@stylerave.com. Ọrụ Ndị Ahịa anyị na-emeghe malite na Mọnde ruo Fraịdee ma ya kụọ elekere iri nke isi ruo na nke isii nke abalị. A ga-azacha ajụjụ gị n'ime awa iri abụọ na anọ.
Maka enyemaka ozugbo, pịa + 1.516.806.0803.
Ebee ka ụlọ ahịa Style Rave dị?
Shoplọ ahịa anyị dabere na New York yana iwu niile na-ebuga n'ụlọ nkwakọba ihe anyị n'ime awa iri abụọ na anọ.
Kedu iwu nkwụghachi ego?
Anyị na-enye mgbanwe ngwaahịa na akara ahịa ahịa maka azụmaahịa. Agbanyeghị, ejirila ngwa ahịa alọghachite, ọ ga-adịrị n'ọnọdụ mbụ ya na mkpado niile, gụnyere hangtags ọ bụla ka etinye. Anyi anaghị anabata ihe nke etere, akwa ma ọ bụ nwee akara mbụ emere.
Biko mara na ego mbupu / njikwa ego anaghị akwụghachi ụgwọ.
Mgbe nnata nke ngwungwu ịghachite, a ga-ahazi akara ahịa n'ime ụlọ ahịa n'ime ụbọchị anọ na ise. Ga-enweta ozi-e na nkọwapụta kredit gị ụlọ ahịa ozugbo a nabatara nloghachi gị.
Ngwongwo ndi a abughi nke aghaghachitere: ihe ndị ikpeazụ rere ere, akwa nwanyị / intimates, ahụ na ngwa.
Anyị na-anya isi na iberibe iberibe iberibe nke ọma ma nyochaa ihe ọ bụla tupu mbupu ya mere nnata nke ihe (mebiri emebi) bụ ihe ụkọ. Na ihe atụghị anya na ihe gị ruru ihe mebiri emebi ma ọ bụ nwee nkwarụ, biko kpọtụrụ anyị n'ime awa iri anọ na asatọ site na mgbe ịnyefe. Anyị ga-achọ ihe akaebe nke mmebi dịka onyunyo na-egosi mmebi ahụ. Na nnabata, anyị ga-ewetara akara nloghachi. Nke a bụ naanị ikpe ebe anyị na-akwụghachi na usoro ịkwụ ụgwọ mbụ.
Kedu ihe nkwụghachi usoro?
Achọrọ ịmalite nkwupụta niile, gụnyere nlọghachi, n'ime ụbọchị atọ (3) nke ụbọchị nnyefe iji nye gị. Biko kpọtụrụ anyị site na email na shop@stylerave.com maka nọmba nlọghachi ikike (RA) na ntuziaka ndị ọzọ dị ka ngwa ahịa agaghị anabataghị ikike mbụ.
Ozi ịlaghachi azụ niile aghaghị ịgụnye nọmba iji maka iji mee ihe.
Biko tinye otu ikike ikike maka nloghachi ma chekwaa ngwugwu gi tupu ilaghachi nnyefe. Mara na ndị ahịa na-ahụ maka ịkwụghachi ụgwọ mbupu ego.
Azụmaahịa niile akwadoro maka nloghachi ga-ebugharị n’ime ụbọchị abụọ (2) azụmahịa nke nnata nke ikike nlọghachi.
Iwu niile nke mba ụwa ga-agbarịrịrịrị nzi akwụkwọ ozi na-erughị ụbọchị asaa site na ụbọchị natara. Ọ bụla nloghachi mba ụwa natara ka ụbọchị iri anọ na anọ gafere site na ụbọchị a nabatara agaghị anabata ya.
Iji mụtakwuo maka ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị, pịa ebe a.
Iji hụ azịza nye Mbupu na Nnyefe Ajụjụ, pịa ebe a.
Njikere. Tọọ. Lọ ahịa!
Jikọọ anyị na Instagram